DEG-DEG: Soomaaliya oo xiriirka u jartay Iran – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 7 January 2016 13 March 2016
Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo khamiis ah xiriirka u jartay dowladda Iiran, iyadoo ku biirtay dowladaha Carbeed ee garab istaaga u muujiyay dowladda Sacuudiga Carabiya oo khilaaf adag kala dhaxeeyo Iran.
Kulan Golaha Wasiirada ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray go’aan rasmi ah oo xiriirka loogu jaray Iiran.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa dhowaan war saxaafadeed ay soo saartay ku cambaareysay weerarkii Safaaradda Sacuudiga ee Tehran lagu qaaday.
Soomaaliya ayaa ku biirtay, dowladaha Jabuuti, Baxreyn, iyo Sudan oo xiriirka u jaray Iiraan, iyadoo dowladaha Jordan, Kuwait iyo Qadar ay u yeerteen Safiiradooda u joogay Tehran, halka Imaaraadka Carabta ay hoos u dhigtay howlihii diblomaasiyadeed ee Iiraan.
Xasaradda siyaasadeed ee dhex aloosantay Sacuudiga iyo Iran ayaa kacday kadib markii Sacuudi Carabiya toogatay wadaad Caan ah oo lagu magacaabi jiray Sheekh Namar Alnamar oo Shiici mucaarad ku ah qosyka boqortooyada Sacuudiga.
Iaran ayaa safaarad ku leh magaalada Muqdisho, waxaana xiriirka Soomaaliya u jartay dalkaas ka dhigan yahay in safaaraadooda Muqdisho la xiri doono.
Dhawaan waxaa ciidanka nabadsugidda Soomaaliya uu Muqdisho ku xiray 2 nin u dhashay dalka Iran, kuwaasoo lagu eedeeyey in madhabta Shiicada ku faafinayeen Soomaaliya.
War kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa u ronaa sidan “Iyadoo la fulinayo go’aanka ka soo baxay Golaha Wasiirrada Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, January 07, 2016 , Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga waxa ay u yeertay Sii hayaha Safaaradda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ee Muqdisho , waxa ayna gudoonsiisay go’aanka , waxaana laga codsaday in isaga iyo diblomaasiyiinta kale ee Iran ay dalka uga baxaan muddo 72 saacadood gudahooda.
Tallaabadan ayaa timid kadib baaritaan dhab ah oo la sameeyay , laguna ogaaday in Iran ay ka fulineysay Soomaaliya howlo qalqal gelinayay amniga, deganaanshaha, wadajirka iyo midnimada Ummadda Soomaaliyeed.
Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay ugu baaqeysaa Iran inay xushmeyso madax banaanida dowladaha, joojiso faragelinta gudaha, ilaaliso qawaaniinta, heshiisyada caalamiga ah iyo cahdiga Vienna ee xiriirada diblomaasiyadeed.
Libya:Attack on police training center in Libya’s Zliten kills 65